I-Old Art Studio
Point Lookout, Queensland, i-Australia
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Nicole
Phila njengomuntu wasendaweni wasendaweni kulolu hlelo oluvulekile, igumbi lezivakashi eliphansi. Sihlehlela endaweni enhle yasehlathini futhi ekhuphuke igquma eliphakeme, amamitha angu-600 kuphela ukusuka eFlinders Beach, uhambo olufushane oluya eStraddie Hotel, amakhefi, izitolo namanye amabhishi asePoint Lookout. Unokungena kwakho nendawo yokupaka emgwaqweni nomndeni onobungane waba-3 nezinja ezihlala phezulu. Indawo ekahle yokuthi imibhangqwana iphinde ishaje ngemuva kokuthatha zonke isiqhingi okufanele inikeze.
Ukungena kwakho endaweni ehlotshiswe kahle, evulekile yohlelo.
Ikhishi lihlonyiswe ngezinto ezibalulekile okuhlanganisa ifriji, i-microwave, igedlela, i-toaster, ipani likagesi lokuthosa, i-dinnerware, i-cutlery kanye nosawoti, upelepele, itiye, ikhofi noshukela.
Indawo yokudlela - itafula lokudlela nezihlalo.
Indawo yokuhlala - osofa, i-TV, imidlalo yebhodi, fan yezinyawo.
Igumbi lokugezela - ishawa, indlu yangasese, usinki, amathawula, i-shampoo, i-conditioner nokugeza umzimba.
Umnyango wengilazi oshelelayo unikeza ukufinyelela okuqondile egcekeni elingemuva okwabelwana ngalo, elingase futhi libe nengane eneminyaka engu-4 ubudala, inja enobungani, amakhangaru kanye ne-koala eyisakhamuzi, uMnu Big Ears.
4.76(71 okushiwo abanye)
4.76 · 71 okushiwo abanye
Indlu isemaphethelweni asentshonalanga kaTramican Street phezulu egqumeni eliwumqansa. Kukude nesiphithiphithi sasePoint Lookout, kodwa kuseduzane namabhishi (Flinders Beach, Home beach & Adder Rock), indawo yokusebenzela, i-dive shop (Manta Lodge and Scuba Centre), Bowls Club, Community Hall kanye ne-Oasis on Straddie Function. Isikhungo.
Buqamamana kancane kuneStraddie Hotel (cishe amakhilomitha amathathu nokukhuphuka kwelinye igquma)
Isikhungo sePoint Lookout singaphansi kwemizuzu emihlanu uma uhamba ngeGorge Walk, amakhefi, iSurf Club kanye ne-Main Beach.
Ngihlala esitezi esiphezulu futhi cishe ngizoba lapho uma unemibuzo noma izinkathazo ngenye indlela, ngingatholakala ngomlayezo noma ngocingo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Point Lookout namaphethelo